Umahluko wenguqulo kwiOfisi yeMephu yeMephu kunye neOfisi yeMobile yeOfisi 6 -Geofumadas
Meyi, 2010 Geospatial - GIS, GPS / Izixhobo
Kwiphepha lokugqibela siye sathetha malunga nedatha elayishiwe ukusuka kumaqela aseMagellan, kwaye ukusuka apho kubakho isidingo sokucacisa ngeenguqu ezahlukeneyo ze-MobileMapper Office.
I-MobileMapper Office ye-6
Le software, ezayo xa uthenge MobileMapper 6, isofthiwe entsha, ehamba ngokukhawuleza kwinguqulo ye-1.01.01
Ukunceda koku kukuba kunokufakwa zombini kwikhompyuter yedesktop, nakwinkqubo yokusebenza yeWindows yeWindows GPS. Ngale nto, unako ukwenza emva koko ngqo kwiqela, kwintsimi.
Olunye ulwazelelo esilubonileyo kukuba ayinayo inketho yokuthumela kwelinye ilizwe, incwadana ithi kodwa akukho qhosha elinye elivumela ukusebenza ngedatha ngaphandle kweefayile zeefom, ezinokuthi zenziwe ngasemva, zigcinwe kwindawo yazo yoqobo. Obu buchule kulindeleke ukuba bongezwe kwiinguqulelo ezintsha.
Iiprojekthi kulo mnye zithatha ukwandiswa .map, kwaye ziyifayile elula yereferensi yangaphandle, kuba njenge-.mmx okanye .prj ibonisa idatha equlethwe kwiindlela ezahlukeneyo.
Le software ingalayishwa kwi-Ashtech FTP kwesi sixhobo
I-Map Map Office
Le yenguqu yenkcubeko, isofthiwe ye-PC, eyavela kwiinguqulelo ze-MM Pro kunye neyo Promark3 iza kuhlobo 3.4a. Iyahambelana neMobile Mapper Pro 6.52, 6.56 kunye nezixhobo ze-7x.
Izibonelelo zoku zikukusebenza kwayo ngedatha ye-AutoCAD / Microstation (dxf), ikwakhona neMapinfo (mif), i-ESRI (shp) kunye ne-excel (csv) okanye idatha ye-waypoints (mmw). Unokwenza oku ukungenisa ngaphakathi okanye ukuthumela ngaphandle.
Ukungancedi kulapho, ngelixa i-MM6 isebenza ngokuthe ngqo kwiifayile zeemilo, kwiidilesi zazo ezifanelekileyo, iyazingenisa ngaphakathi elizweni, iphinde ithumele kwelinye ilizwe kwakhona. Kungenzeka ukuba ezi zinto zisebenzayo sele zikhona kwiinguqulelo ezintsha zeOfisi yeMM6, njengoko inophuhliso olomeleleyo nolutsha.
Kuyenzeka ngale nto ukuba wenze iimephu zangasemva ezibandakanya idatha yevektha (dxf, shp, mif) kunye ne-raster, phakathi kwayo ibandakanya i-.ecw kunye .tiff. Ezi mephu zangasemva zingathunyelwa kwi-GPS zisuka kwinkqubo, okanye zikotshwe kwimemori ye-SD.
Iiprojekthi kule inokwandiswa .mmj (ifayile yemephu yeofisi yomsebenzi weJob), kwaye ngokungafaniyo neyokuqala, zigcina zonke iinkcukacha ezenziwe ngaphakathi. Inomhleli woluhlu lweziko, olunokuthi idatha yedatha enxulunyaniswe neefayile ezingenisiwe inokuguqulwa, kwaye inokugcinwa ngolwandiso lwe .mmf.
Oku kunokukhishwa kwiphepha le-Ashtech, kwesi sixhobo
Ngale nto ndiyathemba ukuba ndacacisile ukuhluka.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-GPS Promark 3, uluvo lokuqala
Post Next Indlela yokuxhaswa kwi-Microstation GeographicsOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-3 ziye kwi- "MobileMapper Office kunye neMobileMapper 6 eyahlukileyo kwiinguqulelo zeOfisi"
GERAL ACUÑA uthi:
MAMELANI BAHLOBO, NDIFANELE NDIJONGE UKUJONGA INDLELA YOKUGUQULA IMPENDULO ENGASEKUQALENI KWIPROMARK 3 GPS ENDINAYO KWINKQUBO YOKUQALA. UKUSUSELA NDIYISINDISILE. KWENZEKA UKUBA XA NDIDIBANISA I-GPS AKUFAKI I-GPS DRIVERS ... NGOKU ANDINAKHO UKUTHUMELA IMAPHA YOKUGQIBELA KWIPROGRAM YOKUQALA 3.
I-Ofisi ye-Mapper yefowuni ikhupha idatha ye-GPS, ukuba ngaba amanqaku angena nge-x, kwaye, z ezi anokuzithumela ngaphandle kwi-dxf kwaye uzibone kwi-AutoCAD
IVAN BELTRAN uthi:
Umbuzo wam kukuba ingaba MOVILE OFISI Mapper ndidala ilifu point kunye kumazwe angaphandle ukuya Excel kunye AutoCAD AS ukuba usebenza ngqo GPS